Hevitra mahavariana momba ny totozy Magic Pro | Avy amin'ny mac aho
Indraindray ny famolavolana dia miseho amin'ny endrika foto-kevitra izay mety ho fanatsarana ny ho avy amin'ny fitaovana. Raha ny vokatra Apple dia mahazatra ny mpamorona mamela ny eritreriny hisidina ary amin'ity tranga ity, na dia mety ho vokatra sarotra aza ny fanamboarana azy. mahazaka mora foana ny tombo-kasen'ny sonia Cupertino.
Tompon'antoka tamin'ny fanaovana an'io Mouse io no mpamorona Vincent Lin, vitantsika izany jereo ity hevitra manaitra ity amin'ity tranonkala ity. Ireo fiasa atolotra azy dia mahavariana tokoa ho an'ny Mouse ary azo antoka izany mihoatra ny iray no maniry ny hanana Magic Mouse Pro toy izany eny an-tanan'izy ireo.
Fitaovana misy velarana mikasika eo amin'ny sisiny hikorisa, ergonomika feno ampiasaina amin'ny tanana roa ary amin'ny fihetsika tena revolisionera. Hevitra iray hafa mahaliana amin'ity hevitra noforonin'i Vincent Lin, dia ny eo anoloan'ny Mouse ny seranan-tsambo, izay zavatra toa tsy tadiavin'i Apple na ho hitany.
Ary izany tokoa amin'ny Magic Mouse farany navoaka niaraka tamin'ny tsipika iMac dia tsy nanova ny seranan-tsolika Lightning ambany kokoa izay tsy mampiasa azy io mandritra ny enta-mavesatra… Noho io antony io fotsiny dia mendrika ny hijerena ity totozy ity. Amin'ity tranga ity dia foto-kevitra izany ka tsy afaka hanana illusions momba izany koa isika.
Mety ho nahita an'io hevitra io i Apple indray mandeha ary nanandrana naka tahaka azy tamin'ny fomba sasany, saingy efa sarotra kokoa ny maminavina, inona no mazava fa tianay ity maodely ity ary manana izany izy famolavolana tena mahavariana sy andalana miaraka amina fampiasa sasany izay mampiasa azy ho totozy tena mahaliana. Te hanana izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Hevitra mahavariana momba ny totozy Magic Pro
Ady tanteraka: ROME REMASTERED Patch 2.0.1 Azo alaina izao